१० दिनपछि तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा, रसुवागढी अझै अनिश्चित - Kohalpur Trends
१० दिनपछि तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा, रसुवागढी अझै अनिश्चित
१० फागुन, काठमाडौं । चिनियाँहरुको ल्होसार बिदा सकिएपछि सोमबारबाट तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा आएको छ । एक सातादेखि बन्द नाका खुलेसँगै अब व्यवसायीहरुले चाहेजति सामान तातोपानी नाकाबाट भित्र्याउन सक्ने तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
‘माघ ३० गते शुक्रबारबाट बन्द भएको नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ, आज ८ वटा कन्टेनर आउँदैछन्,’ खत्रीले भने । नाका खुलेसँगै अब नेपाल भित्रिने कन्टेनरको कोटा पनि हटेको खत्रीले बताए ।
नेपाली व्यवसायीले चाहेजति सामान तातोपानी नाका भएर भित्र्याउन सकिने भन्सार प्रमुख खत्रीको भनाइ छ । नाका भएर माल वस्तु आयातका काम ढुक्क भएर गर्न चिनियाँले पक्षले आग्रह गरेको भन्दै उनलेे नेपाली व्यवसायीलाई पुनः व्यापार सुरु गर्न आग्रह गरे ।
अब खुल्दा नाकाबाट हुने ब्यापार कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि चिनियाँहरुले कुनै जानकारी नगराएको उनको भनाइ छ ।
Previous Previous post: कसरी अघि बढ्दैछ अफ्रिकामा कोरोना खोप कार्यक्रम ?
Next Next post: डा. भट्टराईले दिल्लीमा चिकित्सक भेटे, भोलि अस्पताल भर्ना हुने